About Us -. Zhengzhou soo baxayo ayaa dheeldheel CO, Ltd
Nooca ganacsi Manufacturer, Company Trading
Location Henan, Shiinaha (Dhul)
Main Products raacid cusub, WAYDAARKA, guddoomiyaha duulaya, markab, wheel ferris, baabuur go'ay, tareenka dalxiiska, diyaarada is-control, kortaan caweyska, pendulum weyn, Ballon samba, boodi kangaroo, boodi rihii, carsaanyo, koob kafee iyo raacid kale qoqobada.
Total Shaqaalaha 201 - 300 Dadka
Dakhliga sanadlaha Total a US $ 5 Milyan - US $ 10 Million
Year la aasaasay 1999
Top 3 Suuqyada Suuqa Domestic 46%
Shahaadda BV, CE, SGS, CO, iyo wixii la mid ah
Zhengzhou soo baxayo ayaa dheeldheel Qalabka Co., Ltdwaa takhasus ah oo ku saabsan qorshaynta guud lagu ciyaaro, design qalabka dheeldheel iyo wax soo saarka. Waxaan xubin ka tahay IAAPA iyo Shiinaha dheeldheel Machine Association. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah raacid cusub, WAYDAARKA, guddoomiyaha duulaya, markab, wheel ferris, baabuur go'ay, tareenka dalxiiska, diyaarada is-control, kortaan caweyska, pendulum weyn, Ballon samba, boodi kangaroo, boodi rihii, carsaanyo, koob kafee iyo kale qoqobada raacid.
Waxay ku taallaa magaalada Zhengzhou ee Shiinaha, baxayo ayaa dheeldheel waa soo saaraha si toos ah lagu qalabeeyay qalabka wax soo saarka oo casri ah iyo shaqaale xirfad leh. Iyada oo waaxda awood Design, R & xarunta D, workshop Maro adag, workshop Farsamada, workshop Play jilicsan, waaxda Control Quality, xarunta Maamulka Operation, ka dib-Sales waaxda Service, dayactir bakhaar iyo wixii la mid ah, taas ayaana ah sida aan u bixiyaan qalabka aqoon oo waxaad ka samaysaa faa'iido weyn u macaamiisheena ka France, Algeria, Uzbekistan, Hindiya, Iran, Mongolia, Brazil, Philippines, Iraq, South Africa, Indonesia, iyo dalal kale oo badan.
Soo baxayo ayaa dheeldheel caan ku tahay iyada laynoogu Maro adag, tayada gacanta tan iyo bilowgii aad u of farshaxan, caaryada in rinjiyeynta. 7 qiraan habka, top rinjiyeynta baabuur brand, qolka-fasalka rinjiga Sare, ka dhigi midabada laagu iyo wax soo saarka dhammeeyayna raagaya.
Our warshad iyo waxyaabaha waxaa shahaado la BV, CE, SGS, CO, iyo wixii la mid ah. Waxaan leenahay R & D koox xirfadeed in la dhiso nidaam design iyo gacan ku haynta farsamo. Waxaan kaa caawin karaa inaad noqotay wax shahaado ah oo aad suuqa.
Soo baxayo ayaa dheeldheel waa mid aad u mahadisaan macaamiisha jir ah si ay u doortaan badeecada our, iyo rajeynayaa in la dhiso xiriir guul-guul ah iskaashi la macaamiisha cusub oo dheeraad ah. Wadajir, waxaan abuuri doonaa raaxo badan iyo madadaalo, waayo, dadka oo dhan ka badan dunida.
Cutubyada soo saaray
Ugu sarreeya Ever
WAYDAARKA, guddoomiyaha duulaya, markab, raacid diyaarada iyo wixii la mid ah 752 985 Set / dajisaa
Taariikhda Available --- Taariikhda dhacay
CE Shenzhen BKC Imtixaanka Co., Ltd oo dhan raacid park dheeldheel 2017-04-17
patent State Intellectual Property Office oo dhan raacid park dheeldheel 2017-04-17
shahaado sharaf CAAPA qalabka dheeldheel 2016-03-14
liisanka ganacsiga xafiiska maamulka magaalada Zhengzhou ee warshadaha iyo ganacsiga qalabka dheeldheel 2008-05-28 ~ 2068-05-27
Suuqa Domestic 46%
Bari Asia 6,69%
Boqolkiiba dhoofinta: 41% - 50%
Dhoofinta Mode: Hayso License dhoofinta Own
Tirada Shaqaalaha Wasaaradda Ganacsiga: 6-10 Dadka